Ubumfama kwiiFudo | Ngeentlanzi
UViviana Saldarriaga | | abanye, Ufudo
Uninzi lwazo Izifo ukuba ezi zilwanyana zinokubandezeleka, zibangelwa kukusilela kwendalo, okunokuthi kuvele emanzini, mhlawumbi ngenxa yokuba iqondo lobushushu alichanekanga okanye kungenxa yokuba likwimeko embi, nangenxa yokutya okanye ukusilela kwesondlo, xa kukho ukunqongophala ezinye iivithamini, ikhalsiyam, phakathi kwezinye. Esinye sezifo ezixhaphakileyo zofudo kukungaboni, kwaye oofudo abancinci banamathuba okuba bahlupheke.
Ubumfama, iqulathe ukubonwa emehlweni okanye ukuvalwa okufanayo, okubangelwa luhlobo oluthile lokudumba kunye nokwenziwa lukhuni kwelinye leenkophe zakho. Inokubangelwa luhlobo oluthile lokonakala emehlweni alo, nto leyo eyenza ukuba izilwanyana zingakwazi ukuzivula. Ngale ndlela, ubumfama ekuqaleni ngekhe buchaphazele amehlo. Kwiimeko ezininzi, ngaphandle kobumfama, amehlo aya kuhlala esempilweni ngokupheleleyo, kuba ebeya kutshixwa phantsi kwelinye leenkophe zawo, yiyo loo nto kungenakwenzeka ukuba babone. Kodwa ukuba ufudo belunokungaboni, alunakukwazi ukondla, alunakufumana kutya, kwaye lungafa yindlala.
Phakathi oonobangela bokungaboni izinto ezininzi zifunyenwe. Okokuqala, enye yezinto ezinokuchaphazela kakhulu isilwanyana kukucoca okanye amanzi etephu. Njengoko sisazi sonke, amanzi aphuma empompini anezixa ezikhulu zeklorine, into eyingozi kakhulu kwezi zilwanyana zincinci. Kungenxa yesi sizathu, ukuba sicebisa kuni nonke nina bofudo ekhaya, okanye abaceba ukubanayo, endaweni yokuba nisebenzise amanzi aphuma etephini, sebenzisa amanzi angenachlorina okanye aphathe amanzi etephu ngolunye uhlobo lweantichloro.
Nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela unobangela wobumfama kwiifudo, kuba amehlo abo anokuchaphazeleka kwesi sifo ukuba abanayo i-vitamin A eyaneleyo emzimbeni wabo, ukuba banesifo esithile usulelo lomngundo, okanye ngokulula ukuba ukungunda kuqala ukuvela kwindawo yazo echaphazela kwaye ivutha amehlo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ufudo » Ubumfama kwiiFudo
Iingcebiso zokwenza indawo yokuhlala ufudo ekhaya